Fandaharana hanaovana fampisehoana tany am-boalohany sy famoronana | Famoronana an-tserasera
Fandaharam-potoana hanaovana fampisehoana voalohany
Amin'izao fotoana izao ny fampisehoana ataon'ny Internet, ny sanganasa, ny tetik'asa ary ny teti-bola atolotra ny mpanjifa dia vita, amin'ny ankamaroan'ny tranga, ny fametahana ireo antontan-taratasy ireo amin'ny alàlan'ny mailaka. Amin'ny tranga sasany dia mila mametraka famelabelarana ianao hanambarana ny hevitrao sy izay tianao hatao ho an'ny mpanjifa. Saingy, tsy ianao irery, ka izany no antony ilanao fampisehoana voalohany, mahery, mamorona ary indrindra fampisehoana tsy hay hadinoina.
Ankehitriny, ahoana no fomba fahazoanao izany? Manaraka izany, hiresaka aminao izahay ny fomba fanaovana fampisehoana tany am-boalohany ary inona ireo programa mamela anao hanao ireo fampisehoana ireo, na karama izany na maimaim-poana, amin'izay, arakaraka izay ilainao dia azonao atao ny misafidy izay mifanaraka indrindra amin'ny zavatra ilainao.
1 Fampisehoana am-boalohany, inona ireo?
1.1 Ahoana no tokony hisy ny fampisehoana voalohany
2 Inona ireo programa hampiasaina hamoronana fampisehoana tsy hay hadinoina
2.2 Fampisehoana voalohany: Emaze
2.4 Fampisehoana voalohany: Intuiface
2.5 Google Slides
2.7 Hakiu Deck
2.9 Fandaharana hafa azonao ampiasaina
Fampisehoana am-boalohany, inona ireo?
Ny famelabelaran-kevitra dia azo faritana ho fomba fampisehoana sy fanomezana fampahalalana amin'ny mpanjifa, olona, ​​orinasa na vondrona momba ny andiana data, valiny na tetik'asa tian'izy ireo tanterahina.
Raha ampidirina ny «original», iza no hahitana fampisehoana izay miavaka amin'ny fomba, ny endrika na ny fizarana ny vaovao amin'ny fomba izay tsy mahasarika ny sain'ny olona fotsiny noho ny fomba nanehoana azy ireo, fa ny antontan-taratasy ihany efa "manintona" ampy hisy vokany tsara amin'ny olona mahita azy.
Ahoana no tokony hisy ny fampisehoana voalohany
Ary ankehitriny rehefa fantatrao hoe inona ilay fampisehoana, inona no mampiavaka ny original? Eny, manokana, ireto no lafiny:
Sary kalitao sy manintona. Raha atao teny hafa, dia manaova singa hita maso manintona ny saina, fa koa misy akony ary mamela fahatsiarovana tsara ho an'izay mahita azy.
Safidy tsara amin'ny famolavolana. Ny loko, ny endritsoratra, ny fampifangaroana miaraka amin'ny sary, ny audio, ny horonan-tsary… Izay rehetra tsy maintsy hiaraha-mandeha tonga lafatra hahatratrarana fampisehoana 10. Ary noho izany dia tsy maintsy jerenao ireo antsipiriany rehetra mety hanimba na hampiakatra fampisehoana.
Fotoana mifehy. Satria rehefa hanao famelabelarana dia manana fotoana voafetra ianao; Raha diso tafahoatra ianao dia esorina ny teboka. Ary raha tsy mahomby koa ianao. Ho fanampin'izay, tsy maintsy fehezinao fa ny fotoana fampisehoana dia manana fotoana ampy fotsiny, mba hahafahany mamaky tsara, mandalina ny votoatin'ny tsirairay amin'izy ireo, sns.
Visual mifanohitra amin'ny lahatsoratra. Matetika ny olona no entin'ny sary eo alohan'ilay lahatsoratra. Izany hoe, kely kokoa ny vakian'izy ireo ary mijery bebe kokoa ireo sary. Ka araraoty ity hevitra ity.
Fahatsorana. Kely no betsaka. Mitadiava minimalism amin'ny famelabelaranao, misy singa vitsivitsy fa misy fiatraikany.
Inona ireo programa hampiasaina hamoronana fampisehoana tsy hay hadinoina
Fantatrao izao hoe inona ilay fampisehoana tany am-boalohany, fotoana tokony hampahafantaranao ny sasany amin'ireo programa sy rindrambaiko tsara indrindra hamoronana azy ireo. Ary ireo dia hanampy anao hahatratra ny vokatra farany amin'ireo izay tsy hadino, izay indrindra no ilainao rehefa manome hevitra amin'ny mpanjifa ianao ary mila mifaninana amin'ireo matihanina na orinasa hafa.
Amin'ity lafiny ity dia amporisihinay ireto manaraka ireto:
Knovio dia programa maimaim-poana izay manana plus mihoatra ny hafa. Ary mamela anao Tsy vitan'ny hoe mamorona famelabelaran-kevitra "mahazatra" izy io, fa mihoatra izany. Azonao atao ny mampiditra horonan-tsary ary na dia audios aza amin'ny fampisehoana, afaka mizara ny valiny farany amin'ny tambajotra sosialy na mandefa izany amin'ny client amin'ny alàlan'ny mailaka.
Ny iray hafa manararaotra lehibe azy dia ny habetsaky ny horonantsary tsy voafetra, fa afaka mampiditra betsaka araka izay ilainao ianao.
Fampisehoana voalohany: Emaze
Fandaharana iray hafa hanaovana fampisehoana tany am-boalohany dia ny Emaze, fitaovana tena ilaina iray izay hiomanana amin'ny famelabelaran-kevitrao ao anatin'ny minitra vitsy. Ary ny fananana môdely miaraka amina fomba matihanina izay hanampy anao amin'ny doka famoronana.
Inona no dikan'izany? Inona ary no azonao atao mba hanampiana anao? modely hanampiana ny fampahalalana ilainao sy hitsitsiana fotoana. Mazava ho azy fa na dia fitaovana maimaimpoana aza izy io dia voafetra; Raha mandoa ianao dia ho afaka hiditra amin'izay rehetra omen'ny programa anao.
Visme dia manana fampiharana bebe kokoa noho ny programa manokana. Mitovy amin'ny PowerPoint ny endriny saingy tsotra kokoa io ary mandeha amin'ny zavatra hoforoniny izy io fampisehoana am-boalohany ao anatin'ny minitra. Mety handany fotoana be indrindra aminao ny hahitanao tsara izay azon'ity fitaovana ity atao ho anao, fa ny marina dia hahita fampiharana ianao handaminana ny angona, horonan-tsary, feo, sarintany, rohy, sns. mora amin'ny alàlan'ny maodelin'izy ireo.
Fampisehoana voalohany: Intuiface
Ity mpaneho hevitra ity dia misy mpanaratsy sy mpanaraka azy. Ary mahatonga anao hisafidy ny fampisehoana manintona sy matotra, na ny fampahalalam-baovao. Eny, rehefa mamaky; dia afaka mamolavola tetikasa iray hatramin'ny voalohany ka mahatonga azy hifandray. Raha heverinay ihany koa fa zavatra tsy mahazatra dia afaka mahazo isa maro amin'ny mpanjifa ianao amin'izany.
Mazava ho azy fa somary kely ny endriny fototra sy tsy misy fotony kokoa, fa ny famahana sy ny fahazoana famelabelaran-kevitra tany am-boalohany, ny fikafika dia ny fanolorana ireo fampahalalana sy sary amin'ny fomba izay manatsara ny endrika farany.
Raha tsy te-hisintona programa amin'ny solosainao ianao, amin'ity tranga ity dia tsy hanana olana ianao. Ho fanampin'izay, dia fitaovana miaraka amin'izany olona maromaro no afaka miara-miasa amin'ny fotoana iray, manampy amin'izany ny famolavolana famelabelaran-kevitra ataon'ny vondrona nefa tsy mila mandefa ny rakitra hatrany hatrany mba ho hitan'ny rehetra, novaina ...
Anisan'ireo mahatsara azy io, azonao atao ny mampiditra sary mihetsika, horonan-tsary, sary, endritsoratra ... izay mahatonga azy io ho maro asa ho an'ny asa.
Swipe dia fitaovana an-tserasera iray hafa izay tokony ho ao an-tsainao rehefa manao fampisehoana voalohany. Ary io no mamela mamorona fampisehoana interaktif, afaka mizara azy ireo amin'ny olon-kafa (mety amin'ny ekipa miasa) na koa mamorona fanadihadiana sy fitsapan-kevitra izay mora valiana amin'ny telefaona finday na takelaka. Zavatra iray izay androany dia bonus fanampiny.
Miaraka amina endrika iray mitovy amin'ny Instagram, Hakiu Deck dia programa iray ahafahanao mamorona famelabelaran-kevitra tany am-boalohany manome ny laza rehetra ireo sary ireo.
Midika izany fa tsy natao ho an'ny karazana famelabelaran-kevitra rehetra, fa natao ho an'ireo mifandraika amin'ny sary, sary, sns. satria mandeha tsara izy io ary azonao atao ny manova azy ho PDF na PowerPoint hizara azy amin'izay tianao.
Fandaharana iray hafa azonao ampiasaina dia ity. Izy io dia fampiharana izay azonao atao mamorona tatitra, antontan-taratasy, fampisehoana sns. mora, fa misy miampy: mahay mampiasa angano nomerika.
Maimaimpoana izy io na dia misy fetrany amin'ny zavatra rehetra azonao atao aza, saingy mendrika ny andramana izany, indrindra satria ny valiny atolotra dia matihanina ary afaka mahazo fampisehoana voalohany tena tsara ianao.
Fandaharana hafa azonao ampiasaina
Fantatsika fa mety tsy dia ampy ny fanaovana lisitra vitsivitsy rehefa mamorona fampisehoana voalohany, mamela anao programa hafa izahay hanandramana mitady izay mety indrindra aminao:
Fampisehoana an'i Canva.
Keynote an'ny Apple.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Inspiration » Fandaharam-potoana hanaovana fampisehoana voalohany
Ahoana no fomba hamoronana ny grunge amin'ny Photoshop
Ahoana ny fomba fananganana banner YouTube any Canva, tsikelikely